နေအိမ်/အကြံပေးသူ/M.2 SSD adapter - အကောင်းဆုံး USB hard drive အဖုံး ၅ ခု
Vangelis10 ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2021
အတိတ်၊ ၃.၅ လက်မ (၆.၃၅ စင်တီမီတာ) ပြင်ပ hard drive enclosures များသည်အလွန်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ သို့သော်ယနေ့တွင် M.2 SSD adapter ပိုပိုပြီးနာမည်ကြီးလာတယ်။ ယခင်ကိစ္စနှင့်မတူဘဲ၊ အဒက်တာများသည် သေးငယ်ပြီး အပိုပါဝါထောက်ပံ့မှုယူနစ်မပါဘဲပင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ USB ကြိုးဖြင့် သင့်ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် လက်ပ်တော့သို့ ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ စျေးကွက်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူနှင့်မော်ဒယ်အများအပြားရှိပါတယ်။ M.2 SSD အရံအတားကို ရွေးချယ်သောအခါ အရာများကို ခြေရာခံရန် မလွယ်ကူပါ။ သင့်အား အကောင်းဆုံး M.5 SSD အဒက်တာ ၅ ခုနှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
contents တွေကို ဖျောက်ပါ
1 M.2 SSD adapter
3 မှန်ကန်သော M.2 memory bar အိမ်ရာသည်မည်သည်နည်း။
4 M.2 SSD hard drive ကို adapter ၌ထည့်ပါ
5 အကောင်းဆုံး M.5 SSD adapter ၅ ခု
6 1. M2 U r ELUTENG USB 3.0 hard drive အဖုံး
7 2. ADWITS USB 3.0
8 3. EasyULT M.2 USB adapter (ကေဘယ်ကြိုးမလိုပါ)
9 4. FIDECO M.2 NVME SSD အရံအတား
10 5. NIMASO M.2 NVME SSD enclosure-PCIe USB 3.1
11 နောက်ထပ် M.2 SSD adapter များ
12 PCIE adapter
13 2.5″ SATA3enclosure သို့ SSD adapter
M.2 SSD အရံအတား အရမ်းနာမည်ကြီးကြတယ်။ ကွန်ပျူတာအသစ်တွေကိုပိုပိုပြီးသုံးပါ M.2 SSD hard drive များမရ။ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသည် memory bar သေးသေးလေးများရောင်းအားပိုပိုပြီးမြင်လာသည်။ မှကျေးဇူးတင်ပါသည် M.2 SSD ကို သငျ့လျြောအောငျပွုပွငျသောစကျ သင်သုံးနိုင်သလား M.2 SSD hard drive ကို external storage media အဖြစ်သုံးသည် အသုံးပြု။ ဟိရိ SSD latch များ နိုင်သည် ပြင်ပ hard drive Windows PC (ဒက်စ်တော့ သို့မဟုတ် လက်ပ်တော့)၊ Apple Mac နှင့်/သို့မဟုတ် Linux စနစ်များသို့ USB မှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
၎င်းအတွက်ဆက်သွယ်မှုရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးရှိသည် M.2 SSD adapter, အဆိုပါ သိုလှောင်ခန်း ကွန်ပျူတာ၊ လက်ပ်တော့ကို USB, PCIe (သို့) SATA မှတဆင့်ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးအမြန်နှုန်းအထိရောက်နိုင်သည် 10 GBit / s အထိရောက်အောင်သွားပါ။
မှန်ကန်သော M.2 memory bar အိမ်ရာသည်မည်သည်နည်း။
တစ်ခုဝယ်တဲ့အခါစံနှုန်းတွေကဘာတွေလဲ M.2 ပေးရပါတယ်။hard disk adapter က စဉ်းစားရန်? အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းစျေးကွက်တွင်ကွဲပြားသော M.2 memory stick များစွာရှိသည်။ တစ် ဦး ကောင်း၏ကုန်ကျစရိတ် M.2 SSD adapter ပေါင် ၈ နှင့်ပေါင် ၄၀ ကြားရှိသည်။ သိုလှောင်မှုချဲ့ထွင်မှု၌သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကကောင်းမွန်သော M.8 SSD adapter တစ်ခု ၀ ယ်သောအခါငွေမချသင့်ပါ။
သင်မ ၀ ယ်မီအရေးကြီးသောဂုဏ်သတ္တိများကိုသင်စဉ်းစားသင့်သည်။
အပူသည်ကောင်းစွာမည်သို့ပျံ့နှံ့သနည်း။ memory bar သည်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အပူကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးဤပြင်ပအိမ်ရာသည် passive သို့မဟုတ် active cooling ရှိမရှိသတိပြုသင့်သည်။
မည်သည့်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သနည်း။ သင့်ကွန်ပျူတာတွင် USB-C port ရှိလျှင် USB-C port ပါသော M.2 SSD adapter (သို့) အနည်းဆုံး USB-A to USB-C adapter တစ်ခုပေးသင့်သည်။
သင်၏ M.2 hard drive အတွက်မှန်ကန်သော adapter ကို ၀ ယ်ပါ။ M-Key (သို့) B-Key ပါတဲ့အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် 2230, 2242, 2260 နှင့် 2280.
M.2 SSD hard drive ကို adapter ၌ထည့်ပါ
M.2 ကိုပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခြင်း SSD hard drive ပါ adapter ထဲမှာအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ hard drive ကိုသေးငယ်တဲ့ဝက်အူနဲ့အမှုကိုတွဲထားတယ်။
M.2 SSD adapter တပ်ဆင်ပါ
ELUTENG M2 SSD Enclosure USB 3.0 SATA Adapter5Gbps M.2 NGFF HDD Enclosure သည် B Key နှင့် B&M Key SATA SSD (2230/2242/2260/2280) ကိုထောက်ပံ့သည်၊ PCIE/NVMe SSD, UASP ထောက်ခံမှုမရှိပါ
SATA NGFF M.3.0 2/2230/2242/2260 Key B (သို့) B&M SSD SuperSpeed ​​Adapter၊ M.2280 SATA -based SSD အတွက် Cordless External Enclosure - အနက်ရောင်
EasyULT M.2 USB Adapter (ကေဘယ်ကြိုးမလိုပါ)၊ USB2မှ M.3.0 SSD သို့ NGFF SATA B / B + M Key M2 SSD5Gbps UASP 2230 2242 2260 2280 SSD အတွက်သုံးသည်
FIDECO M.2 NVME SSD enclosure-PCIe USB 3.1, Gen 2, 10Gbps, USB C hard drive enclosure adapter and caddy for M-Key or M + B Key NVME SSD 2230/2242/2260/2280 (tool-free installation)
NIMASO M.2 NVME SSD enclosure-PCIe USB 3.1 Gen210Gbps, USB C 3.1Gen2cable, USB C hard drive case adapter နှင့် M-Key သို့ M + B Key NVME SSD 2230/2242/2260/2280 သို့ USB သည် UASP ကိုထောက်ပံ့သည်
USB က 3.0
အကောင်းဆုံး M.5 SSD adapter ၅ ခု
1. M2 U r ELUTENG USB 3.0 hard drive အဖုံး
【 M2 SATA အိမ်ရာ】 M.2 SATA adapter သည် M.2 NGFF SATA SSD B / B + M keys များအားလုံးကိုထောက်ပံ့သည်။ မှတ်ချက် - ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ SSD အသစ်ကိုအသုံးမပြုမီ ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းအား PC တွင်အသိအမှတ်မပြုပါ။
【 USB 3.0 hard drive enclosure - SSD မျိုးစုံ၊ 】 M2 SATA enclosure သည် M.2 SSD ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ 2230/2242/2260/2280 mm Samsung 950/951/960 SSD, KingSpec SSD, WD M2 Black SSD, Toshiba SSD တို့နှင့်မကိုက်ညီပါ။ အလူမီနီယမ်ပစ္စည်းများ၊ ပိုမိုတာရှည်ခံ၊ ပေါ့ပါးပြီးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။
ELUTENG M.2 SATA adapter သည် M.2 NGFF SATA SSD B / B + M keys အားလုံးကိုထောက်ပံ့သည်။ ELUTENG မှ M2 adapter သည် SATA 2230/2242/2260/2280 SSD ကိုထောက်ပံ့သည်။ ဟိရိ ELUTENG M.2 SSD adapter M Key PCIE/NVME SSD, Samsung 950/951/960 SSD, KingSpec SSD, KING POWER SSD, WD M2, Black SSD, JHK SSD, Toshiba SSD ။
2. ADWITS USB ၃ ။0
22 * 30mm, 22 * ​​42mm, 22 * ​​60mm, 22 * ​​80mm M.2 NGFF SATA SSD တို့ဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသော
သေးငယ်သည့်အရွယ်အစား၊ သယ်ဆောင်ရန်အဆင်ပြေ၊ plug and play၊ hot swap ကိုထောက်ပံ့သည်
22 * 30mm, 22 * ​​42mm, 22 * ​​60mm, 22 * ​​80mm M.2 NGFF SATA SSD တို့ဖြင့်စုံလင်စွာလိုက်ဖက်သည်။ SATA M.2 key B / B&M SSD ကိုသာထောက်ပံ့သော်လည်း SATA M.2 key M & PCIe SSD ကိုမပံ့ပိုးပါ။
3. EasyULT M.2 USB adapter (ကေဘယ်ကြိုးမလိုပါ)
M.2 SSD to USB: M.2 to USB 3.0 adapter, သင်၏ M.2 SSD ကို USB 3.0 interface သို့လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ SATA-based interface B key နှင့် B + M key M.2 SSD, high speed M.2 NGFF SSD to USB3.0 adapter, data transfer or data backup အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအဖြေတစ်ခု (ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ： PCIE ကိုမထောက်ပံ့ပါ) NVMe / M key SSD)
လွယ်ကူသောတပ်ဆင်မှု၊ USB ကြိုးမလိုပါ။ USB ကြိုးမေ့တာပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဆက်သွယ်မှုကိုရိုးရှင်းပါ။ တပ်ဆင်မှုလွယ်ကူပြီး driver မလိုပါ။
-0,50 EUR 11,99 EUR
သင်ကေဘယ်များအသုံးမပြုချင်ပါက EasyULT M.2 USB adapter ကိုတစ်ချက်ကြည့်သင့်သည်။ M.2 SSD to USB: M.2 to USB 3.0 adapter, သင်၏ M.2 SSD ကို USB 3.0 interface သို့လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ 22 * 30/42/60/80: M.2 SSD (m.2 key B, B + M type) နှင့်သာတွဲသုံးနိုင်သည်။ အသုံးပြုနိုင်သော SSD hard disk: 22 * ​​30,22 * 42,22 * 60,22 * 80 NGFF (M.2) interfaces SSD hard disk ကိုထောက်ပံ့သည်။ Windows 2000 / XP / 2003 / Vista /7/8 /10, Linux, Mac 10.0 OS, Plug & Play, driver မလိုပါ။
4. FIDECO M.2 NVME SSD အရံအတား
FIDECO M.2 NVME SATA SSD အရံအတား၊ PCIe USB 3.1၊ 10Gbps၊ Gen2 ဟာ့ဒ်ဒရိုက် အရံအတား၊ 2230 2242 2260 2280 M.2 NVMe/SATA SSD အတွက် M-Key သို့မဟုတ် M+B Key၊ UASP ပံ့ပိုးမှု
【တာရှည်ခံဆောက်လုပ်ရေး】 FIDECO SSD အိမ်ရာကိုအရည်အသွေးမြင့်အလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးနှစ်အောင်စထက်မပိုသောအလေးချိန်နှင့်သေးသွယ်သည်။ မပျက်မစီးနိုင်သောသံမဏိအလူမီနီယံသည်တုန်ခါမှုနှင့်တုန်ခါမှုတို့မှကာကွယ်ပေးသည်။ Case ကိုနှစ်ဖက်စလုံးတွင်လေ ၀ င်လေထွက်အပေါက်များဖြင့်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သင့် solid-state drive အတွက်ပိုမိုအသက်ရှည်စေသည်။
【Universally compatible SSD အိမ်ရာ】 FIDECO SSD caddy သည် 2230 2242 2260 2280 M.2 PCIe NVME SSD နှင့် M-Key သို့မဟုတ် M+B Key နှင့် M.2 SATA SSD ကဲ့သို့သော Samsung / Toshiba / Crucial တို့မှ / Kingston / Seagate / WD / Integral / PNY စသည်တို့။ SSD အိမ်ရာသည် Windows၊ Mac OS နှင့် Linux ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ အပိုဒရိုက်ဗာ သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်မလိုအပ်ဘဲ ပလပ်ထိုးပြီး ကစားပါ။
FIDECO M.2 SSD အိမ်ရာသည် 2230/2242/2260/2280 နှင့် PCIe NVME M-Key နှင့် M + B Key SSD တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ Windows / Mac, OS / Linux ကိုထောက်ပံ့သည်။ အပိုမောင်းသူ (သို့) ဆော့ဝဲမသုံးဘဲပလပ်ထိုးကစားပါ။ M.2 SATA B-Key နှင့် B + M Key SSD ကိုပံ့ပိုးမပေးပါကိုသတိပြုပါ။
5. NIMASO M.2 NVME SSD enclosure-PCIe USB 3.1
compatible အကြီးအကျယ်လိုက်ဖက်သော SSD အိမ်ရာ】 -NIMASO M.2 SSD အိမ်ရာသည် 2230/2242/2260/2280 နှင့် PCIe NVME M -Key နှင့် M + B Key SSD တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ဥပမာ Samsung / Toshiba / Crucial / Kingston / Seagate / WD / Integral / PNY စသည်တို့ SSD Case သည် Windows / Mac, OS / Linux တို့ကိုထောက်ပံ့သည်။ အပိုမောင်းသူ (သို့) ဆော့ဝဲမသုံးဘဲပလပ်ထိုးကစားပါ။ M.2 SATA B-Key နှင့် B + M Key SSD ကိုပံ့ပိုးမပေးပါကိုသတိပြုပါ။ အိမ်ရာကို ABS နှင့်ပြုလုပ်ထားသည်
【 10 Gbps Super Fast PCIe Data Bridge N -NIMASO Hard Drive Caddy တွင် USB 3.1, Gen2PCIe data bridge တို့ပါ ၀ င်ပြီးဒေတာကူးပြောင်းမှုနှုန်း 10 Gbps အထိထောက်ပံ့ပေးပြီး USB 3.1, Gen 1 (USB 3.0) နှစ်ကြိမ်ကူးပြောင်းပေးသည်။ ၎င်းသည် BOT နှင့် UASP နှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်၊ ၎င်းသည်ရိုးရာ USB 3.1 ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာဖတ်နိုင်မှုနှုန်းကိုပေးသည်။ အဆင့်မြင့် JMS583 ချစ်ပ်သည်တည်ငြိမ်မြန်ဆန်သောဒေတာကူးပြောင်းမှုကိုသေချာစေပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
NIMASO M.2 SSD အိမ်ရာသည် 2230/2242/2260/2280 နှင့် PCIe NVME M-Key နှင့် M + B Key SSD တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ Windows / Mac, OS / Linux ကိုထောက်ပံ့သည်။ အပိုမောင်းသူ (သို့) ဆော့ဝဲမသုံးဘဲပလပ်ထိုးကစားပါ။ M.2 SATA B-Key နှင့် B + M Key SSD ကိုပံ့ပိုးမပေးပါကိုသတိပြုပါ။
နောက်ထပ် M.2 SSD adapter များ
ဥပမာ PCI Express ကဲ့သို့အခြား adapters များလည်းရှိသည်။ ၎င်းသည် M.2 SSD တစ်ခုထဲအတွက်ဖြစ်နိုင်စေသည် PCIe slot ပါ ချိတ်ဆက်ရန် ဒီ adapter ကကွန်ပျူတာအဟောင်းတွေနဲ့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အပူစုပ်ခွက်ပါသော NVME အဒက်တာ PCIe x16၊ 6amLifestyle M.2 NVME သို့မဟုတ် AHCI SSD သို့ PCIE 3.0 | 4.0... လောလောဆယ်သုံးသပ်ချက်များမရှိပါ 14,99 EUR အမေဇုံမှာဝယ်ပါ
M.2 PCIe အတွက် ၀.၁၂ လက်မ / ၀.၃ စင်တီမီတာအထူ M.4.0 အပူစုပ်စက်နှင့် GLOTRENDS M.3.0 PCIe NVMe 0,12 / 0,3 adapter လောလောဆယ်သုံးသပ်ချက်များမရှိပါ 14,99 EUR အမေဇုံမှာဝယ်ပါ
အပူစုပ်စက်နှင့် EZDIY-FAB NVME PCIE adapter, M.2 NVME SSD to PCI Express adapter to heat sink ။ လောလောဆယ်သုံးသပ်ချက်များမရှိပါ 13,99 EUR အမေဇုံမှာဝယ်ပါ
အလူမီနီယမ်အပူစုပ် (EC-PCIE) နှင့် PCIe X2 / X16 / X8 ကတ်သို့ Sabrent NVMe M.4 SSD လောလောဆယ်သုံးသပ်ချက်များမရှိပါ 14,99 EUR အမေဇုံမှာဝယ်ပါ
GLOTRENDS M.2 PCIe 4.0 / 3.0 adapter နှင့် 0,12 လက်မ (3 မီလီမီတာ) အထူ M.2 အပူစုပ်ခွက် M.2 PCIe SSD ... လောလောဆယ်သုံးသပ်ချက်များမရှိပါ 14,99 EUR အမေဇုံမှာဝယ်ပါ
2.5″ SATA3enclosure သို့ SSD adapter
သင်၏ M.2 SSD ကိုစံ ၂.၅ လက်မ SATA III SSD နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အခြားနည်းလမ်းရှိသည်။ SSD adapter ဖြင့် M.2,5 NGFF SSD ကို2Gbit / s ဖြင့်စံ ၂.၅ လက်မ SATA III SSD သို့ပြောင်းသည်။
Sabrent hard drive များ - ဆက်စပ်ပစ္စည်းအိမ်ရာ M.2 SSD မှ ၂.၅ လက်မ SATA III အလူမီနီယမ်အိမ်ရာ adapter ... လောလောဆယ်သုံးသပ်ချက်များမရှိပါ 9,99 EUR အမေဇုံမှာဝယ်ပါ
ELUTENG M.2 SATA Adapter 22-Pin (7 + 15) SATA III NGFF M.2 SATA-Based Key B / B + M အတွက် 2280 2260 2242 ... လောလောဆယ်သုံးသပ်ချက်များမရှိပါ 8,99 EUR အမေဇုံမှာဝယ်ပါ
EasyULT M.2 USB Adapter (ကေဘယ်ကြိုးမလိုပါ)၊ M.2 SSD မှ USB 3.0 Adapter သို့ NGFF SATA ကိုထောက်ပံ့သည်။ လောလောဆယ်သုံးသပ်ချက်များမရှိပါ 11,99 EUR အမေဇုံမှာဝယ်ပါ
ICY DOCK EZConvert MB703M2P -B - M.2 SATA SSD ကို ၂.၅ လက်မ (၆.၄ စင်တီမီတာ) SATA SSD converter / adapter လောလောဆယ်သုံးသပ်ချက်များမရှိပါ 14,99 EUR အမေဇုံမှာဝယ်ပါ
SSK အလူမီနီယမ် USB 3.1 မှ M.2 NGFF SSD အိမ်ရာ adapter၊ ပြင်ပ SATA အခြေပြု ... 2.982 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ 15,99 EUR အမေဇုံမှာဝယ်ပါ
Windows 10 အောက်တွင် hard drive အမြန်နှုန်းကိုစမ်းသပ်ပါ
Windows အတွက် VPN
VPN နှင့် Tor Browser နှင့်နှစ်ခုစလုံးကိုသုံးခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသလား။